Nimbus Platform Utility Token, NBU၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ ရက်တွင် Value ရှာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်အခွင့်အလမ်း Uniswap တွင်စာရင်းသွင်းမည်လား။
အဆိုအရ Defi Pulse,asite that tracks the number of digital assets locked in different open finance protocols, ဖြူဖြူ locks over $4.1 billion of value.
မှဒေတာ Nimbus Analytics platform reveals that total liquidity stood at over $3.4 million on Feb 22, with NBU trading at $1.25.
Tags: altcoin သတင်း, သတင်း Bitcoin, ယနေ့ Bitcoin သတင်း, Bitcoin စျေးနှုန်း, blockchain သတင်း, Bitcoin ဝယ်ဖို့, crypto ico သတင်း, နောက်ဆုံးပေါ် cryptocurrency, cryptocurrency သတင်း, ယနေ့ cryptocurrency သတင်း, လက်ရှိ Bitcoin သတင်း, လက်ရှိ cryptocurrency သတင်း, defi သတင်း, ethereum သတင်း, ethereum သတင်းယနေ့, ethereum စျေးနှုန်း, ဖေဖော်ဝါရီ, Bitcoin ကိုဝယ်ဖို့ဘယ်လို, ico သတင်း, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ, IOST သတင်းများ, စာရင်း, NBU, nimbus, အခွင့်အရေး, ပလက်ဖောင်း, ဂယက်ထ, ယနေ့ဂယက်ထသတင်း, ဂယက်ထစျေး, တိုကင်, uniswap, utility, ValueSeeking, Vchain သတင်းများ, blockchain ဆိုတာဘာလဲ